Category: ကျွမ်းဘား 0
12>> Category: ကျွမ်းဘား
နေ့စဉ်မိန်းကလေးတစ်အခမ်းအနားသို့မဟုတ်ပဲတစ်ဦးပါတီသွား, တစ်ဦးကိုအစိုးရသောမိဖုရားဖြစ်လာမှအိပ်မက်မက်နေသည်။ မည်သို့ပင်အလုပ်မှာကျင်းပမဲ့နေရာ, ယခုနှစ်အချိန်, ရာသီဥတုအခြေအနေများနှင့်ပြဿနာများကို၏ပုံရိပ်ကို၏ရွေးချယ်မှုပထမနေရာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၏ ညဦးယံအချိန်စတိုင် စတိုင်ညဦးယံအချိန်ရဲ့အဓိကစိုးမိုးရေး - ဒါကြောင့် overdo ကြပါဘူး။ ရွှေသာမည၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုစောင့်ကြည့်အားသာချက်များကိုအလေးပေးနှင့်ကိန်းဂဏန်းအားနည်းချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားရန်အကျိုးရှိသောစေနိုင်ပါတယ်။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအကြောင်းမေ့လျော့မနေပါနဲ့!
နေ့စဉ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသိတယ် - ပြားချပ်ချပ်မုသာစကားကိုဖြစ်စေ, တစ်ဦးသေသပ်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်, လိုအပ်နေသောကိုအခွခေံရှိခဲ့ပါတယ်။ နှင့်အထွေထွေအတွက်, မိတ်ကပ်အခြေစိုက်စခန်း - ထုတ်ကုန်အတော်လေးဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်မျက်စိမရှိ, ခြွင်းချက်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ဤဒေသအတွင်းရှိအရေပြားကိုပိုပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်အထိခိုက်မခံဖြစ်ပြီး, အရိပ်အတှကျအခွခေံအထူးဒီရည်ရွယ်ချက်အဘို့ဒီဇိုင်းထုတ်, သီးခြားယူ သာ.
Unrequited ချစ်ခြင်းမေတ္တာ - အဘယ်သို့ပြုမှ
မ unrequited ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်တော်တို့ကိုနီးပါးအသီးအသီးကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ဒီပထမဦးဆုံးမေတ္တာ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပေမယ့်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုနှင့်အဟောင်းတွေနှစ်အရွယ်တွင်။ ဒါပေမယ့်ပြောရလောက် "ငါသည် unrequited ချစ်ခြင်းမေတ္တာကနေဆငျးရဲခံရ .
အအေးရာသီအတွက်ဗီရိုထဲမှာ အလွန်အရေးကြီးပါသည်နှင့်မကြာခဏ irreplaceable အရာ - ။ တစ်ဦးလက်အိတ် မနှစ်သိမ့်ရန်နှင့်ဗေဒအလှတရားလက်အိတ်ပါးလွှာနှင့်ဒီဇိုင်းဖြစ်သင့် - ပြီးပြည့်စုံသော, သင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအတွက်လက်အိတ်ကိုဖုံးအုပျလျှင်ဒါကြောင့်ပါးလွှာသိုးမွှေးကြိုးနှင့်ဇာထိုးအပ်များသုံးစှဲဖို့ သာ.
နေရောင်၏ပူနွေးရောင်ခြည်ခြွင်းချက်မပါဘဲချစ်ခြင်းမေတ္တာလူအပေါင်းတို့သည် caressing ။ ၏သင်တန်း, ဒီမှာရှိတဲ့လူ့ဇီဝကမ္မတည်ရှိသည်: ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်, ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီ၏ခန္ဓာကိုယ်ဗီတာမင်ဃထုတ်လုပ်ရန်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစျြလြူရှုမှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သော rickets, အရိုးပွရောဂါနှင့်အဆစ်အဖြစ်အလေးအနက်ရောဂါများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ခွင့်ပြုထားသည်။ ဒါပေမဲ့လူကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်အောက်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာနေဖို့ကိုကာကွယ်တားဆီးနေတဲ့ဒီရောဂါလည်းမရှိ - သူတို့ပြောသကဲ့သို့ photodermatosis, သို့မဟုတ်, - တစ်နေရောင်တည့်မှု မ။ ဓာတ်မတည့နေရောင်မှ - ရောဂါလက္ခဏာများ ဒါကရောဂါကြောင့်အသည်း function ကို, ကျောက်ကပ်သို့မဟုတ် adrenal gland ချို့ယွင်းကြသူလူစုကိုအဓိကအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုး။ ဒါကြောင့်အရောင်ချယ်ဘို့အားနည်းစွမ်းရည်မြှင့်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဒါ့အပြင် "နေရောင်တည့်မှု" အလင်းအရေပြား၏အချို့သောပိုင်ရှင်တွေခံရ၏။ အမြိုးသားတို့နေကိုမတည့်ဖြစ်ကြရှားပါးသည်: သူတို့အားသားသမီးများ၏ခြွင်းချက်သောရောဂါခံစားခဲ့ရမိဘတစ်ဦးနှင့်အတူ။ ကိုတည့်မှုမကြာခဏဗီဇဖြစ်ရတဲ့လျက်ရှိသောသူတို့အားရောဂါများကိုရည်ညွှန်းသည်, ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင် photodermatosis ၏အန္တရာယ်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဆိုတဲ့အချက်ကို နေရောင်မှဓာတ်မတည်၏အဓိကရောဂါလက္ခဏာတွေပါဝင်သည်: နေရောင်ထိတွေ့မှုပြီးနောက်မညီမညာဖြစ်နေသောနယ်စပ်မျဉ်းနှင့်အတူအရေပြားအနီအစက်အပြောက်ကြီးမား၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်။ သူတို့ဟာနာရီအတွင်းချက်ချင်းပေါ်ပေါက်, ဒါမှမဟုတ်နာရီ 20 နေရောင်ထိတွေ့မှုပြီးနောက်နိုင်ပါတယ်။ နီခြင်း၏ဒေသများရှိယားယံခြင်း၏ အဆိုပါပေါ်ပေါက်ရေး။ bronchospasm တိုက်ခိုက်မှုများရှားပါးသောကိစ္စများတွင် ။ သွေးဖိအားအတွက် အဆိုပါချွန်ထက်တစ်စက်။ ဝိညာဏ်၏ ပျောက်ဆုံးခြင်း။ ဒီလက္ခဏာတွေအားလုံးသည်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ထင်ရှားစွာပြနိုင်တယ်, သူတို့တစ်ဦးစီသည်နေရောင်မှတစ်ဦးမတည့်ဘို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဤရောဂါ၏အဓိကရောဂါလက္ခဏာတွေပြင်းထန်ယားယံခြင်းနှင့်အသက်အန္တရာယ်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအရေပြားနီခြင်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အဆင်မပြေတည့်မှုဝေဒနာရှင်တွေအများကြီးကယ်နှုတ်။ ဓာတ်မတည့နေရောင်မှ - ကုသမှု ရောဂါကုသရေးအဓိကအားဖြင့်အချက်သုံးချက်ထဲမှာလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်: ရောဂါလက္ခဏာတွေမှသက်သာရာရစေရန်အရေပြား၏အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်ကုသမှု;
ဂရိနိုင်ငံ: တောင်ပေါ်မှာ Athos
တောင်ပေါ်မှာ Athos - အရှေ့မြောက်ဂရိနိုင်ငံအပေါ်တောင်ပေါ်မှာကျွန်းဆွယ်။ ဒါဟာသူ့ခရီးသွားမှတ်တမ်းအတှငျးဘုရားသခငျ၏မိခင်များနေ့ဒီမှာဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောဖြစ်ဖို့ကတိပြုခဲ့ကြောင်းဆိုသည် "Zastutspnitsa ဤအရပ်ဌာနနှင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ကအကြောင်းပူနွေး Hodataitsa ။ " ထို IV ရာစုတှငျပထမဦးဆုံးဘုန်းကြီးကျောင်းများစိုက်ထူခံရဖို့ရှိပါတယ်စတင်ခဲ့သည်။ တချိန်တည်းမှာပင်, ဇာတိပကတိသှေးဆောငျမှုအနေဖြင့်ကျွန်းဆွယ်လာရောက်လည်ပတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးပိတ်ပင်ထားမှုသံဃာတော်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက်။ အဆိုပါဥပဒေနှင့် factual ၏တန်ခိုး တရားဝင် Athos ပေမယ့် - ဂရိနိုင်ငံအတွက်, တကယ်တော့ထိုသို့သန့်ရှင်းသောဘုရားကောင်စီ, တစ်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပြည်နယ်၏အမှုဆောင်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အခွင့်အာဏာအောက်မှဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ပေါ်မှာ Athos ၏ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင်နေထိုင်သောသံဃာ, အခွန်အခများနှင့်တာဝန်များပေးဆောင်ကြပါဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဂရိနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဒေသများအတွက်ကျွန်းဆွယ်၏တရားဝင်အမည်မှာ - "သန့်ရှင်းသောဘုရားတောင်တန်း"၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်ဘုန်းတော်ကြီးသင် ။ အတော်လေးသာမန်ကာကွယ်ဖို့ထို့အပြင်ကျွန်းဆွယ်မှာကောင်းကင်ဘုံရှင်ကြားဝင်အသနားခံရှိပါတယ်။ ဘုရားသခငျ၏မိခင်လုံးဝတရားဝင်ဤအရပ်ဌာန၏အုပ်စိုးသောမင်းဖြစ်၏။ အပျိုကညာ၏ရုပ်ပုံနှင့်အတူတစ်မဂ္ဂဇင်းကနေအသုံးအများဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်းရှိပါတယ် mirotochit စေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သံဃာတော်တွေတောင်ပေါ်မှာ Athos ၏အပေါ်ဆုံးမှာသေးငယ်တဲ့ဖြူသောမိုဃ်းတိမ်ဆွဲထားတဲ့သည့်အခါဘုရားသခင်၏မိခင်များနေ့ကျွန်းဆွယ်အပေါ်ပစ္စုပ္ပန်ကြောင်းယုံကြည်ကြပါတယ်။ သန့်ရှင်းသောဘုရားမြေယာအတွက် စစ်တုရင်ပြိုင်ပွဲ ကံမကောင်းစွာပင်သန့်ရှင်းသောဘုရားပွညျ၏ပိုင်နက်အပေါ်အာဏာကိုချိန်ခွင်လျှာတစ်ခုဂိမ်းရှိပါတယ်။ မယုံကြည်ခြင်း၌ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏ရုရှားကိုယ်စားလှယ်များထဲတွင်ဘုရားဖူးများ၏အစဉ်အမြဲခံရသောစမ်းချောင်း Athos Mount ဖို့ဒါကြောင့်အားကောင်းခဲ့သည်။ တစျခြိနျတောငျ Athos သားအပေါင်းတို့ရုရှားဘုန်းကြီးများ၏ထက်ဝက်အဘို့မှတ်။ ရှေးဟောငျးအီဂရုရှားခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းရှိပြီးသား IX ရာစုအတွင်းကဒီမှာရှိခဲ့သည်။ ထို XII ရာစုတှငျရုရှားစိန့် Panteleimon ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းသောဘုရားမြေယာအတွက် မ Monasticism ကိုဘဝတစျခုလုံးစဉ်နှင့်အပွင့်လည်းနှင့်ကျဆုံးခြင်းသိသည်။ ထို့အပြင်နိုင်ငံရေးရွေ့လျားတွက်ချက်မသာ "လောက" ပြည်နယ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါကြောင့်, သန့်ရှင်းသောတောင်တန်းပေါ်တွင်ရုရှားအနေအထား, ရုရှဘုန်းကြီးကျောင်း (Russika) keliyam နှင့်မြေတပြင်လုံးကျွန်း၏ SCIT ကနေမောင်းထုတ်ခံရရုရှားဘုန်းကြီးများကိုခိုင်ခံ့စေမှုကိုရှောင်ရှားရန်။ ဆမ် Russik ဂရိဘုန်းကြီးများကိုယူ။ ထို့နောက်ဂိမ်း၏သင်တန်းတွင်မူဝါဒများနှင့်ချိန်ညှိထားပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးများအိမ်ခြံမြေဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့် re-ဝယ်ယူခြင်း, XIII ကရာစုနှစ်တွင်ဘုန်းတော်ကြီးအတွက်အထွေထွေကျဆင်းမှုခံစားခဲ့ရ, နှင့်ကမ္ဘာဘယ်မှာတောင်ပေါ်မှာ Athos ကိုမေ့လျော့တော်မူပြီ။ ထိုအခါပြန်လည်ရှင်သန်မှုတဲ့ကာလအော်တိုမန်အင်ပါယာ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်နေထိုင်ကာလရှိ၏နှင့်နောက်ဆုံးတော့ 1912 အတွက်ကျွန်းဆွယ်ဂရိနိုင်ငံမှပြန်လာသောခဲ့သည်။ တချိန်တည်းမှာပင်, ရုရှားအစိုးရရုရှား Panteleimon ကျောင်းတိုက်မှာသံဃာအပြန်ပေါ်အခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။ ယနေ့အမှုသမိုင်းနှင့်ညျသနျ့ရှငျးသောကျွန်းဆွယ်၏ပိုင်နက်ဟေလသလူ, ဒါပေမယ့်လည်းဆာ့, Romanian, ဘူလ်ဂေးရီးယား, ရုရှသာမက၎င်းတို့လုပ်ကိုင်သောအလုပ်အကိုင်ကိုလိုက်သော။ အဆိုပါဘုန်းကြီးကျောင်းများနှင့် hermitages ဂရိတ် Lavra, Vatopedi, Iviron ဘုန်းကြီးကျောင်း Hilandar, Dionysiou, Kutlumus, Pantocrator, Xeropotamou ကျောင်းတိုက်, Zograf, Docheiariou, Caracal, Philotheus, စိန့်ပေါလု၏ Simonopetra ကျောင်းတိုက်မှာ: ဒါဟာထားတဲ့အတိုင်းကျွန်းဆွယ် 20, ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများဖြစ်ပါသည်, ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၏တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက sviatohorsk အဆင့်ဆင့်ရှိကွောငျးကိုထွက်လှည့် , ကျောင်းတိုက်မှာ Stavronikita, Ksanovont, Esphigmenou, စိန့် Panteleimon ကျောင်းတိုက်, Konstamonitou ။ စိတ်ဝင်စားစရာတောင်ပေါ်မှာ Athos ၏ဘုန်းကြီးကျောင်းများစာသားအတိုင်းဒီ list "fixed" ကား, Athos အသစ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၏ဖန်ဆင်းခြင်းရုံမဖြစ်နိုင်ချေ, ဒါပေမယ့်ဥပဒေဖြင့်တားမြစ်ထားသည်။ သို့သော်ထိုအရပ်၌တောင်ပေါ်မှာ Athos 12 ကျေးရွာပေါင်းပေါ်, တကယ်တော့တရားဝင်အဆင့်အတန်း မှလွဲ.
ခိုင်မြဲစွာဖက်ရှင်အတွက်တည်ထောင်ခဲ့သည်အင်္ကျီကိုလှီး Maxi လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ထည့်သည်ယနေ့မိမိတို့အရာထူးလွှဲပြောင်းမပေးခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့ဤမော်ဒယ်များအသီးအသီးတော်တော်ခေတ်မီစတိုင်ကြည့်ရှုမည်။ နောက်ဆုံးရတောက်ပတဲ့, အရည်ရွှမ်းအရသာအရောင်အဆင်း။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာသန္တာအင်္ကျီ - ဒါကြောင့်နွေရာသီ၏ခြွင်းချက်မရှိလမ်းကြောင်းသစ်ဖွင်။ အဝတ်ကိုဝတ်၏ဤဆောင်းပါးကိုသင်ကောင်းသည်နေ့တိုင်းနှင့် output ကိုမှဖြစ်ကြောင်းမတူကွဲပြားသောရုပ်တုဆင်းတုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ option ကို ရှည်လျားသန္တာအင်္ကျီကိုလှီး;